फाइनल पुग्ला सोमपालको टिम ? - सबै खेल
फाइनल पुग्ला सोमपालको टिम ?
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १६:२४ August 10, 20190Comments Global t20 Canada, Sompal Kami, Winnipeg Hawks
पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिग खेलिरहेका नेपाली अलराउन्ड सोमपाल कामीको टिम विन्निपेग हक्स दोस्रो संस्करणको ग्लोबल टि–२० लिग क्यानडाको फाइनल भन्दा एक कदिम पछाडि छ ।
प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशका लागि विन्निपेगले आज राति हुने खेलमा ब्राम्प्टन वुल्भ्सको सामना गर्दै छ । आज राति ११ः४५ मा हुने यो खेलमा जित हात पार्ने टिमले उपाधिका लागि भ्यानकुभर नाइट्ससँगको भेट पक्का गर्ने छ । फाइलन आइतबार राति ११ः४५ मा हुने छ ।
शनिबार राति हुने खेलमा पनि सोमपाल खेल्ने सम्भावना कम छ । एड्मन्टन रोयल्सविरुद्ध मौका पाएका सोमपालले त्यो खेल बल र ब्याट दुवैमा आफ्नो क्षमता देखाउन नसक्दा त्यसपछिका खेलमा उनी प्लेइङ सेटमा पर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि आज पनि उनी खेल्ने सम्भावना न्यून छ ।
समूह चरणमा चौथो स्थानमा रहँदै इलिमिनेटरमा पुगेको विन्निपेगले इलिमिनेटरमा २ सय माथिको लक्ष्य पछ्याउँदै टोरन्टो नेसनल्सलाई पराजित गरेकाले उसको मनोबल उच्च छ । यता, समूहको शीर्ष टिमका रुपमा क्वालिफायरमा स्थान बनाएको ब्राम्प्टन भ्यनकुभर नाइट्ससँग पराजित हुँदै दोस्रो इलिमिनेटरमा पुगेको थियो । तर, समूह चरणमा विन्निपेगविरुद्ध सानदर जित निकालेको ब्रम्प्टनलाई आज केही सहज हुन सक्छ ।
यदि आजको खेलमा विन्निपेगले टस जितेमा उसको फाइनल यात्रा लगभग निश्चित जस्तै हुने छ । किनभने विन्निपेग रनचेजमा निकै उत्कृष्ट देखिएको छ । उसले प्रतियोगिताका ४ खेलमा रन चेज गरेको छ, र त्यसमध्ये ३ खेलमा जित निकालेको छ । जितेका तीनवटै खेलमा विन्निपेगले २ माथि स्कोर सजिलै चेज गरेकाले टस जितेमा उसको फाइनल यात्रा निश्चित जस्तै देखिएको हो । विन्निपेग प्रतियोगितामा २ सयभन्दा माथि रन चेज गर्नै एक्लो टिम पनि हो ।
त्यसको विपरित पहिला ब्याटिङमा भने विन्निपेग कमजोर देखिएको छ । उसले पहिला ब्याटिङ गरेका दुवै खेल गुमाएको छ । उसका लागि बलिङ भने टाउको दुखाई बन्न सक्छ ।
यसैगरी ब्रम्प्टनको टिम भने निकै सन्तुलित देखिएको छ । उसले समूह चणमा भ्यानकुभर बाहेक सबै टिमविरुद्ध सहज जित निकालेको थियो । ब्राम्प्टनका लागि आजको खेलमा कप्तान कोलिन मुन्रो, बाबर हायत, जर्ज मुन्सी र इश सोधीलगायत मत्वपूर्ण हुन सक्छन् । यस्तै, विन्निपेगका लागि जेपी डुमिनी, साइमन अनवर, क्रिस लिन तथा मोहम्मद इरफालन महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् ।
← नर्विचमाथि लिभरपुलको सानदार जित
एलिसनले सुपरकप गुमाउने, साने ६ महिना मैदान बाहिर →
१९ कार्तिक २०७५, सोमबार १६:१६ 0
सान्चेज चम्कँदा चिली क्वार्टरफाइनलमा
७ असार २०७६, शनिबार १७:२६ 0